Karusiyamu Hydride Powder, CaH2 - Goodao Technology Co, Ltd.
yeupfu simbi, ine zirconium, niobium, hafnium uye imwe metaloxides kudzikisira, uye uwane iyo inoenderana poda yesimbi. Inogona kushandiswa seyakareruka hydrogen inogadzira mumiriri yekushaya mvura, hydrogenation, condensing ordesiccant yemakemikari macomputer.
CAS Nhamba 7789-78-8
Unhu pfumbu pfumbu
Nzvimbo yakanyunguduka 675'C
Kuwandisa 1. 9g / cm3 aa
Zvishandiso yeupfu simbi, ine zirconium, niobium, hafnium uye imwe metaloxides kudzikisira, uye uwane iyo inoenderana poda yesimbi. Inogona kushandiswa seyakadzika hydrogen inogadzira mumiririri wekupererwa nemvura, hydrogenation, condensing ordesiccant ye organic makomponi.
Zvivakwa zvecalcium hydride
Chinese zita: calcium hydride
Molecular fomura: CaH2
Nzvimbo yakanyunguduka: 675 ℃
Kuwandisa kwevanhu: 1.7
Calcium hydride, kemikari yakajairika, inowanikwa muCaH2, ine uremu hwemaoremu e42.10. Makira machena-machena kana mapundu, anonetseka zviri nyore, anoshandiswa seanodzora mumiririri, desiccant, kemikari kuongorora reagent, nezvimwewo zvakare isina ruvara rhombic crystal. Maindasitiri zvigadzirwa ndeegrey, orthorhombic kana poda. Inonzwisisa kunyorova. Izvo hazviite nemhepo yakaoma, nitrogen uye klorini patembiricha yemukati, asi inoenderana nemagasi ari pamusoro patembiricha yakakwira kuburitsa calcium oxide, calcium nitrous oxide uye calcium chloride, zvichiteerana. Iyo inogona zvakare kugadzirisa ne ethanol kuburitsa hydrogen uye calcium ethanol. Iko kuderedzwa kwesimbi oxides kwakasimba kupfuura kweiyo sodium hydride kana lithium hydride.
KUSHANDISA kwe calcium hydride
Inoshandiswa muhupfu hwesimbi, painopisa kusvika 600 ~ 1000 ℃, inogona kuderedzwa ne zirconium, niobium, hafnium nedzimwe simbi oxides, uye inoenderana poda yesimbi. Inogona kushandiswa seinotakurika hydrogen jenareta, ichideredza mumiririri, desiccant, analytical reagent.
Pashure: Titanium Upfu, Ti
Zvadaro: Hafnium Hydride Upfu, HfH2